cabdi jiinow khilaaf ayaa ka jira xuduuda gobalka | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
cabdi jiinow khilaaf ayaa ka jira xuduuda gobalka
October 30, 2013 · by biyacade	· in HOME.	·
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow Calasow ayaa sheegay in gobolka Sh/dhexe uu ka jiro khilaaf dhinaca xuduudaha ah.
Cabdi Jiinow Calasow oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ayaa waxaa ay booqasho ku tageen deegaanka Ceel Macaan oo uu ka jiro ishaysad dhinaca maamulka ah, iyadoo maamulka degmada Warshiiq iyo maamulka degmada Balcad uu mid walba sheeganaya inuu hoos yimaado deegaanka Ceelmacaan.
Dadweyne faro badan oo isugu soo baxay bartamaha deegaanka Ceel Macaan ayuu u sheegay Cabdi Jiinow Calasow in deegaankaasi uu yahay mid uu wax ka aasaasay isla markaana wax walba oo ay u baahan yihiin dadka deegaanka Ceelmacaan uu wax ka qaban doono.
“Khilaaf dhinaca xadka ah ayaa ka jira gobolka Sh/dhexe iyadoo degmooyinka Warshiiq iyo Balcad uu khilaaf ka dhex jiro,degmada Mahaday iyo Jowhar dhul ayay isku haystaan,Mahaday iyo Aadan yabaal khilaaf ayaa ka dhexe jira,Jowhar iyo Raage Ceelana muran dhulka ah ayaa u dhexeeya.”ayuu yiri Cabdi Jiinow Calasow.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa sheegay in guddi loo saari doono sidii loo xalin lahaa khilaafaadka ka jira dhinaca xuduudaha degmooyinka gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow Calasow ayaa kormeerkiisa waxaa ku weheliyay ku xigeenadiisa Yuusuf Cabdi Cabdulle iyo Cali Cismaan Ibraahin iyo sidoo kale guddoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sh/dhexe.
Hase ahaatee guddoomiyaasha degmooyinka ee wehelinayay Cabdi Jiinow Calasow ayaan ku jirin guddoomiyaha degmada Balcad Cisman Xaadoole oo khilaaf uu u dhexeeyo.
Mana jirto illaa iyo hadda cid u istaagtay inay wax ka qabato khilaafka u dhexeeya maamulka guddoomiyaha degmada Balcad iyo iyo guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe.
← Weerar ka dhacay xadka Iran iyo Pakistan
dagaaladii ka socday duleedka magaalada jowhar oo istaagay iyo tuulooyin lagu bay →
2 responses to “cabdi jiinow khilaaf ayaa ka jira xuduuda gobalka”
xiis November 6, 2013 at 11:40 am · ·
cabdi jinow muxu wax ka ogyhy waa dabaal xukun loo dhiibee
yaa barayxuduud iyo toona
ismail November 11, 2013 at 8:27 am · ·
war arintan waa arin Abgaal Cusmaan u taal ee cadowga beesha Abgaal nac nacda ha joojiyeen